Mustaqbalka Muqdisho: Matalaad iyo Maqaam Mugdi Ku Jira - Tilmaan Media
Muqdisho oo ah caasimadda umadda Soomaaliyeed iyo magaalada dadka ugu badan ay deggan yihiin ee Soomaaliya. Sidoo kale, waxa ay tahay magaalo taariikh qoto dheer leh. Maantadan aan joogno, Muqdisho oo ah gobolka Banaadir waxaa dhinaca bari ka xiga xeebweynta quruxda badan ee Badweynta Hindiya, galbeed iyo koonfur waxaa ka xiga maamul goboleedka Koonfur Galbeed, halka waqooyina uu ka xigo maamul goboleedka Hirshabeelle. Xamar oo ah magaca caanka ay ku tahay Muqdisho waxa ay weligeed ahayd xarun ganacsi oo dekadaheedu ay u adeegaan bulshooyinka deggan boqollaal kiloometer meelo iyada ka fog. Waa magaalo qeyb libaax leh ku leh wax soo saarka dalka.
Dagaalladii sokeeye ee 90-aadkii iyo intii ka danbaysay dhacay waxa ay burbur aad u daran u gaysteen Xamar. Iyada oo mar ahaan jirtay bilicda Bariga Afrika ayaa bilo gudahood isu baddashay magaalada ugu halisan dunida. Labaatankii sano ee ugu danbeeyay waxaa markii ugu horaysay ay saldhig u noqotay dawladdii ku meel gaarka ahayd ee Carta, Jabuuti lagu soo dhisay ee uu hoggaaminayay Cabdiqaasim Salaad Xasan. Kuma guulaysan dawladdaasi in ay xasiliso caasimadda oo ay guud ahaan gacan ku haynteeda la wareegto. Magaalada waxaa ka arriminayay hoggaamiye kooxyo badankood dawladda tabarta daran ku jees jeesi jiray.
Muqdisho waxa ay wax nabad u eg heshay muddo lix bilood ah markii ay hoggaamiye kooxeedyadii ka saareen Midowgii Maxaamiimta Islaamiga (MMI). Hase ahaatee xasilloonidii markaa la helay ma noqon mid sii waarta. Waxayba u ekeyd biririf yar oo ka soo horaysay musiibooyinkii ka danbeeyay markii Maxaakiimtii la jebiyay oo ay ciidamadii Itoobiyaanka ee xukuumaddii Cabdullaahi Yuusuf taageerayay ay Xamar soo galeen. Waxaa dhacay iska hor imaadyo aad u badan. Xaafado badan oo magaalada ka mid ah aa dadkii ugu badnaa ka soo qaxeen. Dagaallo bilo socda oo lagu soo xusuustay kuwii 4ta bilood kuwa aan ka yaraysan ayaa ka dhacay. Ugu danbeyntii markii qeybo ka mid ah hoggaankii Maxaakiimta ee dibadaha u cararay ay urur siyaasadeed oo mucaarad ah Asmara ka dhiseen waxaa shir wada xaajood ah loogu fariistay Jabuuti. Is casilaaddii Cabdullaahi Yuusuf kaddib waxaa Jabuuti lagu soo doortay Sheekh Shariif oo ahaa madaxii MMI. Markii uu dib ugu soo laabtay Xamar waxaa yaraaday kooxihii iska caabbinta ahaa. Dawladdu waxa ay billowday in ay Xamar ka hawlgasho in kasta oo aysan meelo badan gacanta ku hayn. Intii wixii ka danbeeyay xaaladda Muqdisho way soo roonaanaysay.
Maadaama nidaamka dawladdii Embagati lagu soo dhisay uu ahaa mid federal ah waxaa la billaabay in la dhiso maamul goboleedyo qeyb ka noqonaya dhismaha dawladda federaalka Soomaaliya. Ilaa hadda waxaa Soomaaliya ka jira maamul goboleedyada kala ah: Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, Galmudug iyo Somaliland oo xaaladdeedu weli aysan caddayn. Dhismihii baarlamaanadii dawladihii federaalka ahaa waxaa lagu saleeyay nidaamkii awood qeybsiga beelaha ee 4.5. Kaddib markii baarlamaanka Soomaaliya uu isu beddalay mid leh labo aqal: Golaha Shacabka iyo Aqalka Senate-ka (Aqalka Sare) oo ay ku jiraan xubnaha senatorada ku yimid matalaadda dawlad goboleedyada waxaa soo if baxday dood ah in gobolka Banaadir oo dad badani ku nool yihiin uusan matalaad rasmi ah ku haysan baarlamaanka.
Dooddani oo sanadihii u danbeeyay soo socotay ayaa waxaa hormuud ahaa beelaha isku xamiya in ay ugu deegaan badan yihiin gobolka Banaadir. Waxaa in badan doodo laga galay maqaamka caasimadda oo aan weli la xaddidin. Qodobka 9-aad ee dastuurka ku meel gaarka ah waxa uu sheegayaa:
Maqaamka magaalo-madaxda Federaalka Soomaaliya waxaa go’aan looga gaari doonaa dib-ueegidda Dastuurka, waxaana sharci gaar ah ka soo saari doona labada aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Maadaama weli la samayn dib u eegis ku saabsan dastuurka, weli waxaa mar walba la isku qabsadaa maqaamka muqdisho iyo matalaadda dadka deggan. Dadka qaarkood waxa ay ku doodaan in magaalada muqdisho ay noqoto degmo federal ah oo ay dawladda dhexe maamusho, dadka deggan oo dhanna ay u simman yihiin maadaama ay tahay magaalo weyn oo beelaha Soomaaliyeed oo dhan ay u idil yihiin lana hayn tiro koob sax ah oo lagu qeybsado xubnaha iyada matali doonta haddii la yiraahdo matalaad ha laga siiyo habraaca federaalka ah ee Soomaaliya ay qaadatay.
Dad kale oo waxaa jira qaba in magaalo tirada dadkeedu ay kor u dhaafayaan 2 malyan ay yeelan wayso matalaad in ay tahay xaq darro dadka deegaanka laga galay. Arrintan oo marka hore u muuqanaysa xaq raadis ayaa waxa ay u ekeyd in ay ahayd loollan xubno badsasho oo beelaha u dhexeeya in uu ka danbeeyay. Codadka ugu dheer ee qadiyaddan waxa ay ka yimaadaan shakhsiyaad marka horeba xubno fiican ku haystay golayaasha baarlaamaanka Soomaaliya. Maadaama magaalada Muqdisho ay marna tahay magaalo caasimad ah marna gobol ka tirsan 18-ka gobol ee Soomaaliya ka kooban tahay mar kasta arrintiisu waxa ay ahayd mid cakiran. Qofka loo soo magacaabo magaalada waxa uu isku hayaa laba xil oo kala Duqa magaalada iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir. Kharashaadka xoogga leh ee ka soo xarood dekadda iyo gegida diyaaradaha waxa ay kab weyn u yihiin maaliyadda dawladda federaalka oo aan dhaqaalaha ay beesha caalamka ka soo gala mooyee wax kale ka soo gelin maamul goboleedyada.
Doodda maqaamka Muqdisho iyo matalaadda ay yeelanayso waxaa sii kiciyay doodo bilhii danbe jiray oo ku saabsanaa cidda Xamar xaqa ku leh. Dooddan oo aad xasaasi u ah ayaa waxaa baraha bulshada la isku dhaafsanayay hashtag #unukaaleh ama #annagaaleh ayaa waxa ay u muuqataa mid dadyowga deegaanka Muqdisho beelaha ay ka soo horjeedaan iyada oo la fiirinayo qaarna xaq u yeelanaya qaarna aysan u yeelan doonin. Jahwareerka maqaamka Muqdisho ka jira iyo matalaadda waxaa uu ka muuqdaa dhammaan nidaamka cusub ee federaalka. Siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxa ay doonayaan in deegaan iyo hayb beeleed ay wax ku wada helaan taas oo aan ahayn mid is qaban karta.
Billowgii xukuumadda Farmaajo waxaa dhacay khilaaf soo dhex galay madaxda sare ee dawladda iyo maamulka gobolka Banaadir oo uu markaa ka arriminayay Thaabit Maxamed oo isla markaana ahaa duqa magaalada. Khilaafkaas oo ka soo billowday qeybta gobolka banaadir uu ka yeelanayo dakhliga ka soo xarooda Muqdisho ayaa markii danbe waxa uu ku biyo shubtay maqaamka magaalada. Guddoomiye Thaabit oo ka hadlay furitaanka kalfadhigga 2-aad ee golaha shacabka 8-dii Luulyo, 2017 ayaa waxa uu yiri “Go’aanka Maqaamka magaalo madaxda Muqdisho iyo soo saarista sharciyadeeda gaarka ah waxa uu dusha u saaran yahay golaha shacabka sharafta leh ee maanta aan horjoogno, annaga waxa aan geed dheer iyo mid gaaban ugu fadhinaa in aan wadatashi baaxaad leh la yeelano, reer Muqdisho waa dad dulqaad badan oo jecel dowladda oo bixiya canshuurta waxa ay codsanayaan in gacan laga siiyo sidii ay u dhisan lahaayeen maqaamka dastuuriga ee loo oggolyahay magaalada madaxda Soomaalida”.
Waxaa 27-kii Juun la ansixiyay in Gobolka Banaadir uu 13 xubnood ku yeesho aqalka sare. Waxa su’aal badani la gelinayaa sida xubnahaasi loo qeybsan doono. Arrinta aasaaska u ah meel marinta iyo matalaadda Muqdisho ayaa waxa ay tahay in uu weli tahay magaalo aan maqaamkeedu caddeyn. Iyada oo aan la dafireyn in dadka gobolka Banaadir deggan ay xuquuq leeyihiin xildhibaannada Golaha Shacabka iyo Madaxweynahaba waxa ay matalaad siiyeen magaalo aan maqaamkeedu weli caddeyn. Tirada Xubnaha Aqalka Sare ee 54-ta ah in kastoo dastuurka uu qabo in si simman loogu kala qeybiyo 18-ka gobol waxaa dhacday in xalal siyaasadeed dartood si taas ka duwan loogu kala qeybsaday taas oo dad badani dhaliilayaan. Isla maalinta Muqdisho laga siiyay matalaadda Aqalka Sare waxaa Degmada Columbia (DC) loo aqoonsaday in ay noqoto gobolka 51-aad ee Maraykanka. Muqdisho magaalo madaxda umadda Soomaaliyeed mar kasta waxaa muhiim u ah in ay hesho caddaalad, sinnaan iyo nidaam deegaan oo xasilooni iyo horumar abuura.
W.Q. Xasan C. Xasan